Ceni: “Mbola azo havaozina ny lisi-pifidianana” | NewsMada
Ceni: “Mbola azo havaozina ny lisi-pifidianana”
Karazan’ny mamaly ny fitakin’ny antoko Tim sy ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena. “Ho an’ny Ceni manokana, azony tanterahina tsara raha misy ny lalàna na didy hitsivolana raisin’ny manampahefana momba izany. Tsy misy ny olana eo amin’ny lafiny teknika sy fotoana mialoha ny fiatrehana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna.”
Io ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fanavaozana ny lisi-pifidianana izay anisan’ny lesoka amin’ny zotram-pifidianana. Ny fanokafana indray ny lisi-pifidianana eo anelanelan’ny 16 mey ka hatramin’ny 30 novambra no antsoina hoe fanavaozana manokana ny lisi-pifidianana.
Ny fikitihana na fampidirana sy ny fanatsoahana anaran’olona ao anatin’ny lisi-pifidianana ivelan’ny fe-potoana voalazan’ny lalàna fa anaovana fanavaozana manokana ny lisi-pifidianana izany: ny 1 desambra ka hatramin’ny 15 mey ny taona manaraka.
Andrasana ny fanapahan-kevitry ny governemanta
Amin’ny 28 oktobra ho avy izao ny volavolana tetiandrom-pifidianana naroson’ny Ceni hanatanterahana ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsain’ny Tanàna. Saingy mbola miandry ny fankatoavana sy ny fihaikana mpifidy avy amin’ny filankevitry ny governemanta izany.
Hisy ihany koa ny fanokafana indray ny lisitry ny mpifidy. Anisan’ny nahavelon-taraina ny maro izay. Na antoko na mpanao politika, na firaisamonina sivily mpanara-maso fifidianana, indrindra ny mpifidy izay maro no hoe tsy tafiditra tao anatin’ny lisi-pifidianana tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, na nandatsa-bato aza tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika, taona 2018.